मेयरको भूमिकामा छन् प्रम ओली ? « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७६, शुक्रबार १४:४७
के पी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा छन् । नेपाली काग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाले सत्ताको ढोका खोलिदिएको तत्कालिन एमाले अध्यक्ष ओलीको साख र ग्राफ अहिले धुलिसात् भएको छ ।
गएको वर्ष सत्ता हत्याउन माओवादीको बुई चढेका ओलीले जनमत त पाए । तर त्यसको सही उपयोग भने गर्न सकेनन् । अनेकन सपना बाँडेर जनता ढाँट्न सफल भएका ओलीको दोस्रो वर्षे कार्यकालको आज नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले फेरि नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउने असफल प्रयास गरेको छ । वितेको डेढ वर्षे उखानटुक्का र गालीगलौजमा विताएको ओलीको झुठो आश्वासनको पुलिन्दा पुन खोलिएको छ । तर अब नेपाली जनताले त्यसलाई पत्याउने अवस्था छैन ।
सत्तामा आएपछिका हरेक घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने सधैं विवादापस्पद र राष्ट्रघाती निर्णय मात्र भएको पाइन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण फगत गफैमा सीमित छ । बरु आजसम्म नभएका डरलाग्दा प्रकरणमा एमाले नेताको संलग्नता देखिएको छ । चाहे त्यो बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गाकाण्ड होस् कि खुलामञ्चमा महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको द्रव्यमोह किन नहोस् एमाले नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
नेपाली जनताको विश्वास र भरोसा पाएर प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तारुढ भएको कम्युनिष्टहरुको पछिल्लो कृयाकलापले उनीहरुको मुखुण्डो उदांगो भएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई अब कसैले पत्याउने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले झापाको क्षेत्र नं ५ मात्रै आफ्नो ठान्ने प्रवृत्तिले ओलीको आत्मबल र विश्वास उजागर भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा मात्रै ठूल्ठूला विकास आयोजना पार्न दवाव दिएको सार्वजनिक भएको छ । एउटा संसदीय क्षेत्र त्यसमा पनि दमक नगरपालिका मात्रै ओलीको रुचि र प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । यो अवस्थामा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री कि दमक नगरपालिकाको मेयर ? आज नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यो प्रश्न उठाएका छन् ।
ललिता निवास क्षेत्रमा आफ्नै पार्टी महासचिवले जग्गा किनेको प्रसंगलाई प्रधानमन्त्रीले खुलेर जोगाउने प्रयास गरेका छन् । पार्टी भित्रबाटै व्यापक विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री भने विष्णु पौडेलको बचाउ गर्न उद्यत छन् । महासचिवले व्यक्तिबाट जग्गा किनेकोले अपराध नगरेको उनको लुते तर्क रहेको छ । व्यक्तिबाटै किनेको जग्गा हो भने पनि किन्ने मानिसले आफ्नो जग्गा कहाँ परेको छ र कुन अवस्थामा छ भनेर पक्कै पनि यकिन गर्छ नै ।
त्यसो हुँदा उनले प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्ने जग्गा बुझेर नै किनेको हुनुपर्छ । यसले उनको नियत खराब रहेको स्पष्ट हुन्छ । फेरि त्यस्तो प्राइम लोकेसनको जग्गा केवल पचास हजार रुपियाँ प्रति आना पाउनु भनेको अवश्य पनि दुर्नियत र खोट छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले थप छानविन गरी कारबाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने प्रयास गर्नु बिडम्बनाको विषय हो । आगामी दिन नेपाली जनताले यसको हिसाबकिताव अवश्य पनि गर्ने नै छन् ।